Tag - နည်းပညာta-သုံးသပ်ချက်
Tag - နည်းပညာ(ta) သုံးသပ်ချက်
01.02.2018 07:57 ထရိတ်ဒါတိုင်းသိသင့်သည့် တက်ကနီကယ် အင်ဒီကေတာ
ဘ၀မှာ အောင်မြင်မှုရဖို့ဆိုရင် ပညာဗဟုသုတ ရှိထားဖို့ အရေးကြီးပါတယ် - ဒီစကားက Forexထရိတ်ဒင်းမှာဆိုရင် ပိုတောင်အရေးပါပါတယ်. ထရိတ်ဒါတစ်ယောက်အနေနဲ့ အောင်မြင်ချင်တယ်ဆိုရင် တက်ကနီကယ် Ta သုံးသပ်နည်းစနစ်တွေကို သင်ယူလေ့လ့ာထားဖို့ လိုကိုလိုအပ်ပါတယ်. Ta သုံးသပ်တဲ့နေရာမှာ အရေးပါဆုံးက တက်ကနီကယ် အင်ဒီကေတာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်.
11.07.2018 13:18 အရောင်းအဝယ်အတွက် အချိန်ကာလအပိုင်းအခြား ဘယ်လိုရွေးမလဲ
အချိန်အပိုင်းအခြားများရှိကြပြီး၊ ရောင်းဝယ်သူများအတွက် ဘယ်ဟာကအကောင်းဆုံးဖြစ်မလဲ?
25.05.2018 11:08 ငွေလဲလှယ်နှုန်းကို ဘယ်လိုကြိုတင်ခန့်မှန်းမလဲ?
ဒါဟာ အရေးယူဆောင်ရွက်ရန် အချိန်ပဲ! Metatrader မှာ အရောင်းအဝယ်အော်ဒါတွေ ဘယ်လိုဖွင့်ရ၊ ပိတ်ရမလဲ သင် လေ့လာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ခုဆို Forex ဈေးကွက်မှာ ရောင်းဝယ်ရန်အသင့်ဖြစ်နေပါပြီ။ ဒါပေမ
18.09.2017 12:41 MT4ဆော့ဝဲလ်အတွက် FBSတမ်ပလိတ်
နောက်ဆုံးအကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့သည့် webinarထဲတွင် ကျွန်တော်အသုံးပြုသော MT4တမ်ပလိတ်အကြောင်း
03.09.2018 16:36 ကမ္ဘာ့ရွှေဈေး (XAU/USD) ဆန်းစစ်ချက်နှင့် ခန့်မှန်းချက်များ -3September 2018
ကမ္ဘာ့ရွှေဈေး (XAU/USD) ဆန်းစစ်ချက်နှင့် ခန့်မှန်းချက်များ -3September 2018 ကမ္ဘာ့ရွှေဈေးသည် လက်ရှိတွင် 1201…
gold bitcoin နည်းပညာ(ta) သုံးသပ်ချက်
12.07.2017 11:49 ထရိတ်ဒါ VIC ၏ 2B ပုံစံများ
ထိုးတက်​ (သို့) ကျမယ်​လုပ်​ပြီး မဖြစ်​ပဲ​နေတဲ့ အ​ခြေအ​နေမျိုးဟာ ထရိတ်​ဒါ​တွေအတွက်​ စိတ်​ပျက်​စရာ​ကောင်းပြီး မ​မျော်​လင့်​ဘဲ ခဏခဏ ဖြစ်​တတ်​ပါတယ်​.